Codsiga farriinta Blackberry, BBM, wuxuu awood u siinayaa wicitaannada fiidiyowga ee iOS iyo Android | Wararka IPhone
Barnaamijka fariimaha ee Blackberry, BBM, wuxuu awood u siinayaa wicitaanka fiidiyowga ee iOS iyo Android
Blackberry had iyo jeer waxaa diirada la saaray ganacsiga adduunka, laakiin ka dib markii la bilaabay barnaamijkeeda fariimaha, inbadan waxay ahaayeen adeegsadayaashii doorbiday aaladahaan inay isgaarsiiyaan iyagoon isticmaalin SMS taasoo sii ballaadhisay tirada macaamiisha soo-saaraha. Markii iibinta Blackberry ay bilaabatay inay hoos u dhacdo, iyadoo ay ugu wacan tahay kororka taleefannada casriga ah ee Apple iyo Android, shirkadda Canadian-ka ah waxaa lagu qasbay inay bilawdo barnaamijkeeda fariimaha BBM ee barnaamijyada kale ee 2013, si ay u ilaaliso xiisaha. goor dambe iyo BBM waxay ku soo biirtay tuugada codsiyada farriimaha suuqa oo aan weli la qaadin.
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ka helnaa dhowr codsi oo noo ogolaanaya inaan sameyno wicitaano fiidiyoow ah: Skype, Hangouts, Facebook Messenger ... Inkasta oo ay u muuqan karto wax lala yaabo, wali waxaa jira dad, runtii aad u yar, oo ilaa maantana wali wuxuu isticmaalaa Blackberry, gaar ahaan shaqada. Haddii mid ka mid ah saaxiibbadaa uu la dhibtoonayo Blackberry maalin kasta oo aad rabto inaad la xiriirto isaga oo adeegsanaya wicitaan fiidiyow ah, waad sameyn kartaa hadda. Blackberry ayaa hada cusbooneysiisay barnaamijka BBM ee loogu talagalay macruufka iyo Android si ay u awoodaan inay wicitaan u sameeyaan dhammaan dadka isticmaala barnaamijkan farriimaha.
Barnaamijkan fariimaha, kaas oo uma baahna rukhsad ama adeeg lacag bixin ahayaa hadda laga heli karaa oo keliya Maraykanka iyo Kanada, halkaas oo shirkaddu ku sii wadato inay ku yeelato taageerayaal badan. Waqtigan xaadirka ah hawlgalka wicitaanada fiidiyowga wuxuu ku jiraa wajiga beta laakiin wuxuu ku shaqeeyaa ku dhowaad dhibaato la'aan. Laga bilaabo Juun, shirkadda Canadian waxay adeeggan ka bilaabi doontaa adduunka oo dhan.
Xilligan Blackberry waxay ku iibinaysaa hal aalad suuqa oo ku saleysan Android, Model Model, laakiin inay tahay terminal-dhamaadka sare, in yar ayaa ahayd adeegsadayaasha isaga xiiseynayay, oo ay ku jiraan shirkadaha, in kasta oo ay bixiyaan nidaam-deegaan u gaar ah oo barnaamijyo ah oo na siiya amniga aan ka heli karin Android. Sannadkan oo dhan, shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay suuqa ku soo bandhigto laba qalab cusub oo dhexda u leh si ay u soo jiito isticmaaleyaal badan barnaamijkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Barnaamijka fariimaha ee Blackberry, BBM, wuxuu awood u siinayaa wicitaanka fiidiyowga ee iOS iyo Android
Nasiib darro in aan la isticmaalin, waxay ila tahay aniga sida ugu fiican
Waxaan moodayay Blackberry inuu dhintay
Haye Ignacio, maxaa yeelay waxaan haystaa Baasaboor Blackberry ah oo dhibna igagama haysto, waan dhibtooday markii aan haystay IPhone 5 in mar walba ay tahay inaan rarto oo aanan la wadaagi karin feylasha
Waxaan haystaa Priv iyo Passport waana ku raacsanahay Daniel, waan jeclahay BlackBerry in kastoo aan aqbalo inaan OS 10 ka jeclahay
Jawaab Javier Delgadillo
Sida aad aragto, Mr. Ignacio Sala ma haysto BlackBerry. Waxaan hayaa BB Q10 iyo iPhone 6 mid walbana wuxuu leeyahay awoodo u gaar ah oo kan kale uusan lahayn. Marka la soo koobo, markaan rabo inaan maaweelo naftayda waxaan isticmaalaa iphone, laakiin markay tahay inaan shaqeeyo waxaan hubaa inaan isticmaalo BB. Uma isticmaali lahayn iPhone (iyo ka yar Galaxy) si aan ugu gudbiyo macluumaadka xasaasiga ah.
YouTube sidoo kale waxay diyaarisaa adeeg telefishan internet oo u gaar ah